Madaxweynaha waqtigiisa Dhamaaday Farmaajo oo kulan la qaatay Yoweri Museveni, kadib markii uu maanta gaaray dalkaas. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha waqtigiisa Dhamaaday Farmaajo oo kulan la qaatay Yoweri Museveni,...
Madaxweynaha wartigu ka dhamaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan-doceed la qaatay dhiggiisa dalka Uganda Yoweri Museveni, kadib markii uu maanta gaaray dalkaas.
Labada Madaxweyne ayaa ka wadahadlay xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyada oo ay madaxdu isku raaceen adkeynta xiriirka qotada dheer ee ku dhisan iskaashi iyo wax wadaqabsi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay dhiggiisa dalkaas Madaxweyne Yoweri Museveni guusha uu ka gaaray doorashooyinkii ka dhacay dalkaas, isaga oo u rajeeyey horumar iyo barwaaqo shacabka iyo dawladda Uganda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Uganda u tegay ka qeyb galka caleemo saarka madaxweynaha dalkaas oo dhawaan dib loo doortay markiisii lixaad.
Previous articleGaroonka diyaaradaha ee Tel Aviv oo la xiray shaqaalihii oo laga daad gureeyay caawa kadib Duqayn loo gaystay.
Next articleMo Salah wuxuu u sheegayaa madaxda adduunka inay joojiyaan rabshadaha Falastiin